ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း): ကိုညီလင်းဆက် သို့ ပေးစာ။
အင်တာနက်မှာ စိတ်တိုင်းမကျတာလေးတခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ အကိုသိပြီးသား ဖြစ်မယ်လို့လဲ ထင်ပါတယ်။ အကို နဲ့ ကိုစိုးမင်း မြန်မာစာ အက္ခရာစဉ်မှု ကို ကြိုးစား အား ထုတ်နေတာကိုလဲ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လဲ ဒီအကြောင်းအရာ အကို့ဆီရောက်လာတယ် ဆိုရင်မမှားပါဘူး။
ကျနော်သုံးနေတဲ့ search engine က http://www.google.com.sg/ ပါ။ search box မှာ အင်္ဂလိပ်စာလုံးကို အက္ခရာစဉ်ပေးတာ (search result) တစ်လကျော်လောက် တော့ရှိပြီ။ မြန်မာဖောင့်ကတော့ အယ်လဖာ ဇောဂျီဝမ်း သုံးပါတယ်။
ဒီလိုဗျာ .. အင်္ဂလိပ် အက္ခရာaဆိုရင် ..a လို့ ရိုက်လိုက်တာနဲ့
air asia ------------ 36,300,000 results
amazon ---------- 71,700,0000 results
American idol --- 80,500,2000 results အဲလိုပေါ်တယ်ဗျ။
မြန်မာစာမှာ ကျတော့ အက္ခရာ “က” ဆိုရင် (zawgyione font)
ကဗျာ ---------------- 5350 results
ကွန်ပျူတာ ----------- 45300 results
ကာတွန်းကား --------- 2300 results -- အဲလိုပေါ့ဗျာ။
ကျနော် သဘောမကျတာက မြန်မာစာ အက္ခရာ စဉ်ရာမှာ (search result) မထည့်သင့်တာတွေ ထည့်ထားတယ်။ ကျနော့် အထင် အမြင်မတော်ဘူးလို့ ထင်တယ်။
ဥပမာ။ (ပေါ်တဲ့အတိုင်းပဲ အကို) ”လ” အက္ခရာကို နှိပ်ရင်..
လီး -------------------------- 65 results
လိုး -------------------------- 75 results
လိင်တံ ---------------------- 85 results
လိင်ဆက်ဆံ ---------------- 55 results
လယ်တီဆရာတော် ------- - 25 results အဲလိုကြီး ပေါ်တယ်ဗျာ။ အမြင်ရိုင်းတယ်ဗျာ။
နောက်တခု သဝေထိုး (ေ) ကိုနှိပ်တာနဲ့
စောက်ပတ် ---------------- 55 results
စောက်ရည် ---------------- 55 results
စောက်ကောင်မ ------------- 55 results
လေးဖြူ ---------------------- 55 results
အောစာအုပ် ----------------- 55 results အဲလိုတွေပေါ်နေတယ်။ ကကြီးကနေ အ အထိ စမ်းကြည့် သေးတယ်။
သူတို့ အင်္ဂလိပ်စာမှာကျတော့ vegina , penis စသည် တို့ကို ထည့်မပေးထားဘူး။ (ရှာမယ်ဆို ရှာလို့ရတယ် မြင်သာအောင် ပြမထားဘူး) တကယ် အသုံးများတဲ့ဆိုဒ် တွေပဲ ဖေါ်ပြတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာစာလဲ အဲလို လုပ်လို့ ရမယ်များဆို ဒီလို ညစ်ညမ်းစကားလုံးကို မဖေါ်ပြရင်ကောင်းမယ်။ အခုတော့ဗျာ ရှေ့နောက် မစဉ်းစားပဲ ဒေါသထွက်ပြီး အင်တာနက်မှာ ပြောကြတဲ့ စကားတွေ အင်တာနက်တည်သရွှေ့ မှတ်တမ်းဖြစ်နေတော့မယ်။ (လိုက်ဖျက်လို့ ရရင်များ ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ)။
ပြောတော့ ကိုယ်ငါးချဉ် ကိုချဉ်ကြတယ်. ရွှေ..ရွှေ.. ရွှေ နဲ့ လုပ်တော့ တလွဲတွေ လုပ်နေကြသူတွေလဲ အများသားလားဗျာ။ သူတို့ ကိုယ်စား တကယ် ရှက်မိပါတယ်။ အခု မက်စေ့က အကိုတို့ အတွက် အထောက်ကူ မည်မျှပြုမည် ကျနော် မခန့်မှန်းတတ်ပါဘူး။ ထည့်သွင်း စဉ်းစား စရာ ဒေတာ တခု ရရင် ကျေနပ်ပါတယ်။
DatE Wednesday, June 03, 2009 LaveL ကွန်ပျူတာ မြန်မာစာ
ရွာသားရေ ရွှေတွေက အဆင်.မြင်.လွန်းတော.
သူများနိုင်တွေလဲ filter ဖြုတ်လိုက်ရင် ခင်ဗျားပြောသလို အဲဒါတွေဦးစားပေးဖော်ပြသဗျာ
အကို​ပြောတာ မှန်​လို့ copy
ယူပြီးကျ​နော်​ facebook တင်​လိုက်​ပြီ​နော်​အကို
ကျိကျိတက် မြန်မာ နိုင်ငံ
ကြည့်ကြစမ်းဟဲ့.. တို့တိုင်းနိုင်ငံ အဘယ်လောက် ချမ်းသာသလဲ.. ဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းတွေ .. ရေလုပ်ငန်းဝင်တွေ.. ကျောက်မျက်ရတာနာတွေ.. တွင်းထွက်ကုန်ေ...
အချိန်တွေ ဘာလိုလိုနဲ့ အစ်မကြီးသား တူတော်မောင် ပြည့်ဖြိုးအောင် ဆယ်တန်းအောင်ပြီ.. ကိုယ် ဆယ်တန်းတုန်းက ဂဇက် မကြည့်ခဲ့ရဘူး။ သူများတွေ မြို့ကို...